बिरामी जुत्ताको उपचार गर्ने अस्पताल खोलेपछि | Tapaiko Khabar
बिरामी जुत्ताको उपचार गर्ने अस्पताल खोलेपछि
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ रोचक विचित्र
बिरामी मानिसको उपचार गर्ने अस्पताल त धेरै छन् । कुनै त्यस्ता बिरामी जसको उपचार गर्ने कैयन अस्पताल खुल्न सकेका छैनन् । तर भारतमा एकजना व्यक्तिले बिरामी जुत्ताको उपचार गर्ने अस्पताल खोलेका छन् । आफूलाई जुत्ता डाक्टर दाबी गर्ने ती व्यक्तिको दाबी छ कि उनले जर्मन प्रविधिबाट बिरामी जुत्ताको उपचार गर्दछन् ।
अझ अचम्मको कुरा त के भने ती जुत्ताका डाक्टरलाई चर्चित कम्पनी महिन्द्रा ग्रुपका अध्यक्षले भारतीय व्यवस्थापन संस्थानमा पढाउने जागिर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जुत्ताको डाक्टरले व्यवस्थापन विषय कसरी पढाउला ? कुरा रोचक छ ।
महिन्द्रा कम्पनीका मालिकको विश्वास छ कि बिरामी जुत्ताको अस्पताल खोल्ने यी व्यक्तिले व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीलाई मार्केटिङ विषय निकै राम्रोसँग पढाउनेछन् । जुत्ता डाक्टरको तस्वीर महिन्द्रा कम्पनीका अध्यक्षले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा पनि शेयर गरेका छन् । जुन छोटो समयमै निकै भाइरल बन्यो ।
वास्तवमा आनन्द महिन्द्राले शेयर गरेको तस्वीरमा एकजना जुत्ता मर्मत गर्ने व्यक्तिको तस्वीर थियो । ती जुत्ता टाल्ने, सिलाउने तथा टल्काउने काम गर्ने व्यक्तिको पछाडि एउटा पोष्टर राखिएको छ । उक्त पोष्टमा विरामी जुत्ताको अस्पताल लेखिएको छ र त्यो सँगै ती व्यक्तिको नाम लेखिएको छ– डाक्टर नरसीराम ।
साँच्चीकै अस्पतालमा झैँ उक्त पोष्टमा नरसीरामले काम गर्ने समय उल्लेख छ । जस अनुसार ओ पि डी बिहान९ बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म हुनेछ । दिउसो १ देखि २ बजेसम्म लञ्चको समय हुनेछ । भने लञ्च पछि बेलुकी ६ बजेसम्मै अस्पताल खुल्ला रहनेछ । साथै अगाडि लेखिएको छ-हामीकहाँ सबै खाले जुत्ताको उपचार जर्मन प्रविधि बाट गरिन्छ ।
आनन्द महिन्द्राको ट्विटमा ट्विटेहरुले अनेक खालका प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । एकजना ट्विटर प्रयोगकर्ताले आफुलाई अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोनसनको कथा याद आएको बताएका छन् । जोन्सनले नासामा काम गर्ने एक ड्राइभरको कथा सधै सुनाइरहन्थे । उक्त चालकलाई तिमी के काम गर्छौ भनेर कसैले सोध्यो भने उनको जवाफ हुन्थ्यो( मानिसलाई पृथ्वीबाट चन्द्रमामा पठाउने काममा सहयोग गर्दछु ।
यस भन्दा अगाडीकाठमाडौं आइपुगे मोदी, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको स्वागत
यस पछिबैशाख ३० गते उपत्यका बिदा, के हुन्छ कक्षा ११ को परिक्षा ?
यी युवतीको अनौठो दाबी : भूतसँगै प्रेम र सम्भोग
घर किन्न २० वटा ब्वायफ्रेण्ड बनाउने युवती को हुन् ?
यस्तो ठाउँ जहाँ हिँड्दा हिड्दै निदाउँछन मानिसहरु , सुतेपछि हप्तौंसम्म उठ्दैनन !
त्यस्तो कुन ठाउँ हो जहाँ गाईलाई खतरनाक जनावर मानिन्छ ?
बिहेअघि कुमारित्वको प्रमाणपत्र मागेपछि…
tapaiko khabarजर्मन प्रविधि
tapaiko khabarमहिन्द्रा कम्पनी